Amb, Tarsan oo Farmaajo ugu baaqay in uu iscasilo - Awdinle Online
Amb, Tarsan oo Farmaajo ugu baaqay in uu iscasilo
Safiirka dowladda Soomaaliya u qaabilsan dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ka mid ah Shaqsiyaadka sida weyn ugu dhow Madaxweynaha muddo xileedkiiso dhammaaday ayaa ka dalbaday markii hor taggo baarlamaanka Soomaaliya in uu iscasilo.
Tarsan ayaa sheegay in Soomaaliya ay maanta ku sugan tahay xaalad adag oo mudan in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u tanaasulo si looga baaqsado burbur soo gaara Muqdisho.
Waxaa uu tilmaamay haddii maanta uu Madaxweyne Farmaajo uu u tanaasulo dalka in uu noqon doono halyay ay taariikhdu xusi doonto balse haddii ay taasi dhici weyso in uu qeyb ka noqon doona dhibaatada ka taagan caasimadda.
Waxaa uu sheegay in ciidankii la dhisayay sanadyadii ugu dambeysay maanta ay kala qeybsadeen oo maanta ay kala taageerayaan Musharaxiinta iyo Madaxweyne Farmaajo ayna tahay Qatar weyn.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tan iyo markii muddo xileedkiiso uu dhamaaday waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay banaanbaxyo waa weyn iyo iska horimaadyo u dhaxeeyay Ciidanmo ka wada tirsan dowladda dhexe.
Previous articleGolaha Shacabka oo kulan leh iyo Farmaajo oo hortagay
Next articleJubbaland oo shuruud ku xirtay ka qeyb galka Shir uu ku baaqo Farmaajo